Ajụjụ | Jiangxi OK Science and Technology Co., Ltd.
Kedu oge nkwa nke igwe gị?
otu afọ site na ụbọchị mbupu. N'oge oge ikike, ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ nwere nsogbu dị mma (n'okpuru steeti ọrụ nkịtị), onye na-azụ ahịa na-ahụ maka nnọchi maka akụkụ ndị agbajiri agbaji, na n'efu. Ọnọdụ ndị a n'ime oge ikike anaghị akwụ ụgwọ: A. Ọ bụrụ na akụkụ ahụ mebiri emebi n'ihi ọrụ iwu na-akwadoghị nke onye zụrụ ma ọ bụ ihe ndị metụtara gburugburu ebe obibi, onye zụrụ ahịa ga-azụta ma dochie akụkụ ahụ site na onye na-azụ ahịa ma buru ụgwọ kwekọrọ; B. Ngbanwe nke akụkụ ndị a na-erepịa n'ime oge akwụkwọ ikike abụghị nke a na-akwụghị ụgwọ, na akụkụ ndị ọzọ a na-akwụ ụgwọ na akụrụngwa bụ nke akụkụ ndị na-eri ihe.
nke igwe nlereanya ka m ga-ahọrọ site na ngwaahịa gị?
Anyị na-eme akwụkwọ anụ ahụ na-atụgharị na igwe mbukota, igwe na-eme mkpuchi igwe nwere ike iwepụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igwe ịtụgharị akụrụngwa, biko nye nkọwapụta akwụkwọ jumbo gị, nkọwapụta anụ ahụ gwụchara.
Ọ bụrụ na ịchọrọ igwe akụrụngwa anụ ahụ, biko nye ụdị ngwugwu anụ ahụ na nkọwapụta ngwugwu.
Ọ bụrụ na ịchọrọ akara zuru ezu site na anụ ahụ na-atụgharị na mbukota, biko nye oghere oghere ụlọ ọrụ gị, nkọwapụta akwụkwọ jumbo, nkọwapụta ikike, ụdị ngwugwu ngwugwu ahụ, anyị ga-eme eserese zuru ezu gụnyere anụ ahụ anyị na-atụgharị na mbukota yana ihe niile dị mkpa sistemụ njikwa.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ igwe eji emechi ihe, biko nye foto gị ihe nkpuchi ma rịọ gị.
Anyị ga-akwado ma nye ụdị dabara adaba nke igwe anyị kachasị elu.
Kedu ihe bụ mgbe ahịa ahịa gachara mgbe anyị natara igwe?
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, mgbe igwe ndị ahụ rutere, onye na-azụ ahịa ga-ejikọ eletriki na ikuku n'ime igwe ahụ, mgbe ahụ ndị na-ere ahịa ga-eziga ọkachamara maka ịwụnye akara mmepụta. Onye nzụrụ ahịa ga-akwụ ụgwọ tiketi ụgbọ elu njem ha site na ụlọ ọrụ China na ụlọ ọrụ ndị na-azụ ihe, ụgwọ nke visa, njem njem na ebe obibi. Oge ọrụ ndị ọkachamara bụ awa 8 kwa ụbọchị na ụgwọ ọnwa kwa ụbọchị USD60 / mmadụ.
Onye nzụrụ ahịa ga-enyekwa onye ntụgharị ntụgharị Bekee-China nke ga-enyere ndị ọrụ aka aka
N'oge oge ntiwapụ zuru ụwa ọnụ, Onye nzụrụ ahịa kwesịrị ịma na onye na-ere ere agaghị enwe ike izipu injinia maka ntinye igwe na ịnye ọrụ. Onye njikwa anyị na injinia anyị ga - eduzi / kwado gị site na nkwukọrịta vidiyo / foto / ekwentị. Mgbe nje virus ahụ kwụsịrị na gburugburu ụwa zuru oke, yana visa na ụgbọ elu mba na usoro ntinye na-enye ohere, ọ bụrụ na onye zụrụ ahịa chọrọ ka injinia gaa njem maka nkwado, ndị na-ere ahịa ga-eziga ndị ọrụ ntanetị iji wụnye igwe. Na onye nzụrụ ahịa ga-akwụ ụgwọ visa, njem ụgbọ elu njem site na ụlọ ọrụ China na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke buye, njem njem nri na ebe obibi n'obodo obodo. Salarygwọ ụgwọ nke ọkachamara bụ USD60 / ụbọchị / mmadụ.